BUDDHIST TERMS' Dictionary: DONATION-WATER - ဒက္ခိဏောဒက
DONATION-WATER - ဒက္ခိဏောဒက
DONATION – WATER Dakkhiṇodaka
ဒက္ခိဏောဒက - အလှူရေ၊ အလှူရေစက်။
(၁) အလှူဝတ္ထုကို ပေးလှူရာ၌ မလှူမီ ကြိုတင်ပေးလှူအပ်သော နံ့သာရေ စသော ရေစင်၊ ရေသန့်ဖြစ်၏။ အလှူနှင့် စပ်သော ရေဖြစ်၍ အလှူရေဟုခေါ်၏။ ရေနှင့်တကွ လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို ပေးလှူးခြင်းသည် ကမ္ဘာ့စဉ်ဆက် အလှူရှင်တို့၏ လောကရိုးရာ ကျင့်စဉ်ဖြစ်၏။ အလှူရေသည် သုံးဆောင်ရန်မဟုတ်၊ အလှူရေကို ခံယူရလျှင် အလှူဝတ္ထုကို ခံယူပြီးဖြစ်၏၊ အရှင်စူဠပန် မပါ၍ ဇီဝက၏ ဆွမ်းကို မခံလိုသေးသော မြတ်စွာဘုရားသည် အလှူရေကို သပိတ်၌ လောင်းလှူသောအခါ ခံယူတော် မမူခဲ့ပေ။
(၂) အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်၏ လက်၌ အလှူရေ လောင်းထည့်၍လည်း လှူဒါန်းကြသည်။ ရေစက်ချ လှူသည်ဟု ဆိုနိုင်၏။ ဇေတ၀န်ကျောင်းလှူဒါန်းပွဲတွင် အနာထပိဏ်သူဌေးသည် မြတ်စွာဘုရားလက်တော်၌ အလှူရေကို လောင်းထည့်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
(၃) ရေခံခွက် တစ်ခုခု၌ အလှူရေလောင်းထည့်၍ ရေစက်ချ လှူဒါန်းကြသည်။
(၄) အလှူဝတ္ထုမလှူမီ သပိတ်ထဲ့သို့ အလှူရေကို လောင်းထည့် လှူဒါန်းကြသည်။
(1) In making offerings, before donating something, perfumed water or good clear water is first donated; it is called donation-water. It isacustom practiced from the days of yore. The donation water is not for drinking but isaspecial token of offering; if the water is accepted it means that the offering is accepted. The Buddha did not accept the donation-water in his alms-bowl when poured by Jῑvaka, because the Ven. Cῡḷapaṇna was not yet with him then as he came to accept Jῑvaka’s offering of alms-food.
(2) Some donors pour the donation-water into the hands of the receiver. That is pouring the water of dedication. When Anᾱthapiṇḍika donated the Jetavana Monastery to the Buddha, he poured the donation-water into the hands of the Buddha.
(3) Some donors pour the donation-water intoacup or bowl to mark the successful completion of their donation.
(4) Some donors pour the donation-water into the bowl before making offerings.